Yabelana ngebali lomnye umntu kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yabelana ngebali elivela komnye umntu kwi-Instagram
NgoJanuwari 11, 2019 0 IiCententarios 2620
Injongo eqhelekileyo yokunxibelelana kwezentlalo ihlala ingamandla Joyina abantu. Nokuba kukudibanisa izihlobo kunye noogxa ngokusebenzisa inethiwekhi ekampasi ekhethekileyo, efana nemvelaphi ye-Facebook. Okanye yithathe uye ezikalini ezikhulu, njengoko injalo namhlanje. Iqonga elihlaziye umhlaba kunye nendlela nxibelelana mgama, yi-Instagram. Kwaye le app izise izinto ezintsha ezinje, ezifana nokwabelana ibali lomnye umntu kwi-Instagram.
Okwangoku, abasebenzisi benethiwekhi basebenzisa ama-Instagram ibali rhoqo. Ngale ndlela, ukusasazeka kwe umendo Imbali yayinokuchaphazeleka kweliso. Oku, ngenxa yokuba kulula ukukwazi ukuthumela yonke into efunwa ngumsebenzisi ngaphandle kokugcwala iprofayili yabo. Ukususela, amabali e-Instagram acinyiwe ngokuzenzekelayo kwi Iiyure ze24. Nangona, enye yeemfuno iqonga elalihlangene nazo yayikukuxhasa abasebenzisi ngokuvumela omnye umntu ukuba abelane ngebali kwi-Instagram.
Ukongeza, ngaphambi kokusetyenziswa kweeNdaba ze-Instagram kunye nokukwazi ukumakisha abantu kuzo inethiwekhi kwakufuneka iphumeze uhlaziyo olutsha. Kuzo, ukwandisa uluhlu lwezixhobo zokwenza ngaphezulu Umtsalane kwaye uyilo amabali, ibinye. Kodwa, ukuSebenza kwekhaya okunokuthi kunikwe sisicelo kuya kuba, nokwabelana ngebali ngomnye umntu kwi-Instagram. Nangona okukhankanyiweyo okokugqibela bekukho kwimarike okwexeshana, kuye kwanelisa umnqweno we abasebenzisi womnatha.
Iimfuno zokwabelana ibali lomnye umntu kwi-Instagram
Ukwabelana ibali lomnye umntu kwi-Instagram, umsebenzisi kufuneka ayazi ngohlobo lwabo inkqubo yokusebenza. Kananjalo, ukuba ibali ebeliphinde laphinda lavela kufuneka ukuba livela kumhlobo okanye okufanayo oye wandixelela ukuba ndikunye nawe kwiifoto zamabali e-Instagram. Kwakhona, kufuneka kuvavanywe ukuba inguqulelo yesicelo yeyona nto iphambili kutsha nje, ukwazi ukusebenzisa izixhobo ozifunayo.
Kuya kufuneka ufakwe iileyibhile
Isidingo sokwabelana ngamabali omnye umntu kwi-Instagram, sicacisa ukuba ukuba nawuphi na umsebenzisi unqwenela ukwabelana ibali lomnye umntu, kufuneka ibhalwe ilebheli. Ukusukela ekubeni ukwazi ukwaba I-Instagram Storie kufuneka usebenzise Umyalezo othe ngqo ithunyelwe ngu iqonga Ngexesha lokumakishwa kweposti.
Kuba lukhetho olutsha, kuphela I-iOS kunye ne-Android uninzi lwamva nje baya kuba nakho ukwenza ukuba babelane ngamabali abanye abantu kwi-Instagram, kuba ukuba ngohlobo olufinyeziweyo oluncinci akufuneki babe nakho ukusebenzisa esi sixhobo, kwaye nezicelo zenethiwekhi ezinokwenziwa zithintelwe.
Ungabelana njani ngebali lomnye umntu kwi-Instagram?
Amabali amahle e-Instagram, aququzelele unxibelelwano nokupapashwa kweefoto zabo bonke abasebenzisi be-Instagram. Ke ngoko, kumabali othungelwano ungafakela iileyibheli kwabo babandakanyekayo, okanye nabani na ofuna. Ngamanye amaxesha abanye abasebenzisi umaki Kwelinye ibali ulithanda. Ke, iqonga elibeka iimfuno zabathengi bayo ngaphambili, lidale ukhetho lokwabelana nabanye ibali lomntu kwi-Instagram. Kwaye, umsebenzisi unakho share post apho ibhalwe khona.
Ngokufanelekileyo, ukuze wabelane ibali lomnye umntu kwi-Instagram, umsebenzisi kufuneka abe neakhawunti kwinethiwekhi yoluntu. Ke ngoko, ukusebenzisa isixhobo, kufuneka fikelela iqonga Ngegama lomsebenzisi kunye negama eliyimfihlo.
Kanye, umsebenzisi sele echongiwe kwaye iqonga sele kufunyenwe. Umntu ngamnye kufuneka Jonga itreyi yakho Umyalezo othe ngqo. Oku, ungakwenza, ngokunqakraza kwi icon yebhokisi yeposi, efumaneka kwikona ephezulu yesikrini. Kanye kwitreyini, kuya kufuneka ujonge ukuba ngaba omnye wabahlobo bakho uyimakisha ebalini. Ukuya kamva kwelebheli lomyalezo wesaziso.
Xa, umsebenzisi eye wangena kwingxoxo yalowo mntu ebemake ngaphambili ebalini. Kukho ukubona phantsi komyalezo wesaziso, ithebhu enebinzana "Yongeza lo mxholo kwibali lakho". Ngokuchofoza ukhetho, umsebenzisi unokuwabelana ibali lomnye umntu kwi-Instagram.
Ngoku, umsebenzisi makasebenzise ubuchule bakhe ukuhombisa, ukuba unqwenela, ibali awabelana ngalo. Ukwazi ukuba isazisi sokuqala sokushicilela siya kuvela ngelo xesha Yabelana ngayo kwiprofayile yakho. Ukongeza, umntu lowo unokuseta ibali lakhe ngokusebenzisa izincamatheliso, izipho, ukuzinikezela, kunye nabanye.
Okokugqibela, emva kokubhengeza ubuchule ebalini, umntu ngamnye makenze cofa kupapasho. Kwaye kulungele, ngale ndlela umsebenzisi enze ngayo ukusebenzisa ibali lomnye umntu kwi-Instagram. Emva kokufikelela ngempumelelo, umsebenzisi kufuneka alinde kuphela aze ajonge ukuba zingaphi na iifayile azifumana.
2 Iimfuno zokwabelana ibali lomnye umntu kwi-Instagram
2.1 Kuya kufuneka ufakwe iileyibhile
2.2 Inkqubo yokusebenza
3 Ungabelana njani ngebali lomnye umntu kwi-Instagram?
NgoJanuwari 11, 2019
Ukwenza ithegi kwi-Instagram, Funda indlela yokwenza ngayo!
Ungayithumela kanjani imiyalezo kwi-Instagram esuka kwikhompyuter yakho